Hurdada Iyo Ilaalinta Maskaxda | Dhaymoole News
Hurdada Iyo Ilaalinta Maskaxda
February 11, 2020 - Written by wariye999
Daraasad ay sameeyeen khubaro ka socotay jaamacadda lagu magcaabo Hokkaido University ee dalkaasi Japan ayaa lagu sheegay in shan arimood ay saamayn ku leeyihiin maskaxda, kuwaasi o ku kena dhaawac xoogan.
Dhaawacyadaasi ayaa sheegeen inay sababi karto inuu qofku waasho ama u noqdo mid ay ku badan tahay ilawga iyo fahamka maskaxdiisu.
Waxaanay kooxdan khubarada ahi soo saareen liis ay kusoo qoreen arrimaha ay sheegeen inay dhaawaca soo gaadhsiiyaan maskaxda dadka,waxaana kaalinta koowaad galay Fuud Baxa ama biyo la’aanta oo ay sheegeen inay maskaxda wax badan u dhinto, waxa isaguna kaalinta labaad galay Cabitaanka Sigaarka oo ay cadeeyeen inuu madoobeeyo qaybo badan oo jidhka ka mid ah xidhiidh toosana la leh maskaxda.
Kaalinta saddexaad ayay geliyeen hurdo la’aanta oo ay sheegeen in suntii maskaxda laga maydhi lahaa waqtiga la hurdo inay noqonayaan kuwo ku kaydsama halkaasi taasina ay keento dhaawaca ku yimaada maskaxda,
Waxaana ay ku taliyeen in qofku seexdo hurdo ku filan habenkii. Kaalmaha kalena waxa iyaguna galay daroogooyinka kale ee la isticmaalo iyo khamriga oo noqday kuwo maskaxda dhibaato soo gaadhsiiya,
Cilmi baadhayaashan ayaa sheegay inay arrimahan keenaan in neerfaha maskaxda ay dhintaan , taasina ay keento in dhaawac soo gaadho maskaxda oo ay hawsheeda gabto.